theZOMI: [mrsorcerer:37783] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျွန်တော့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိတယ် …
[mrsorcerer:37783] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျွန်တော့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိတယ် …
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျွန်တော့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိတယ် …
ကျွန်တော့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိတယ် … သူ့ကိုကြည့်ရတာ ကသိကအောက်ဖြစ်လွန်းလို့ ကျွန်တော် သူ့ကိုမုန်းတယ် … အမေဟာ အိမ်ရဲ့ဝင်ငွေအတွက် ပျံကျဈေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ရောင်းရုံမက သူများအိမ်တွေမှာပါ လုပ်လို့ရသမျှ တိုလီမိုလီအလုပ်တွေလည်း အကုန်လိုက်လုပ်တယ် …
မှတ်မိပါသေးတယ် … ကျွန်တော် မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းကပေါ့ … ကျောင်းစုံညီပွဲနေ့မှာ အမေကျောင်းကို ရောက်လာခဲ့တယ် … အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် အရမ်းရှက်ပြီး အမေ့ကို မုန်းတီးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ပြီး ပြေးထွက်လာခဲ့တယ် … နောက်နေ့ ကျောင်းရောက်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက " မင်းအမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲရှိတာလား?? " လို့ မေးပြီး လှောင်ပြောင်ကြတယ် … ကျွန်တော် အမေ့ကို ဒီကမ္ဘာပေါ်ကတောင် ပျောက်သွားစေချင်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ် …
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အမေ့ကိုမေးခဲ့တယ် … " အမေ့မှာ ဘာလို့မျက်လုံးတစ်ဖက်မရှိရတာလဲ?? ကျွန်တော့်ကို တမင် အဟားခံရအောင် လုပ်နေသလိုပဲဗျာ …" အမေက ဘာမှပြန်မပြောဘဲ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ် … ကျွန်တော် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားလိုက်ရသလိုပဲ … ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော် အမြဲပြောချင်နေတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်ရတဲ့ အတွက် စိတ်ထဲပေါ့သွားသလို ခံစားရတယ် … ဒါဟာ ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက် အမေကျွန်တော့်ကို ဘာမှ အပြစ်မပေးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အမေစိတ်ထဲမှာ နာနာကျင်ကျင် ခံစားလိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မတွေးမိခဲ့ဘူး …
အဲ့ဒီညမှာပဲ ကျွန်တော် ညတစ်ရေးနိုး ရေသောက်ဖို့ မီးဖိုချောင်ဘက်သွားတော့ ကျွန်တော်နိုးမှာစိုးလို့ အသံမထွက်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ငိုနေတဲ့ အမေ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် … ကျွန်တော် ညနေက ပြောခဲ့မိတဲ့စကားအတွက် ရင်ထဲမှာ ဆစ်ခနဲ ခံစားလိုက်ရလို့ သူမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး ပြန်လှည့်ပြေးလာခဲ့မိတယ် … ဒါတောင်မှ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကပဲ မျက်ရည်ကျနေတဲ့ အမေ့ကို ကျွန်တော် မုန်းနေတုန်းပဲ … ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကြီးလာတဲ့အခါ ကြီးပွားချမ်းသာစေရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားပေးခဲ့တယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျက်စိတစ်ဖက်လပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် အမေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့လောက်အောင် ဆင်းရဲနေတဲ့ အမေ့ရဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်တော် မုန်းလို့ပဲ …
အဲ့ဒီနောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ စာကို အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တယ် … ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ဘွဲ့ရပြီး ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါရခဲ့တယ် … မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်အကြောင်းမသိတဲ့ တစ်ခြားမြို့က ကျွန်တော့်ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူတို့မြို့မှာပဲအိမ်တစ်လုံးဝယ်ပြီး အခြေချခဲ့တယ် … အခု ကျွန်တော့်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အပြင် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် … ဒီဘ၀မှာနေရတာ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ပါတယ် … ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အမေကို ကျွန်တော်မေ့ထားနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ …
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်သမီးငယ်လေးဟာ ကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်ပြီး အိမ်ထဲပြေးဝင်လာပါတယ် … ကျွန်တော် အိမ်ရှေ့ထွက်ကြည့်တော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ် … အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် အမေပါ … အမေဟာ အရင်လို မျက်လုံးတစ်ဖက်လပ်နဲ့ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ … " ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ?? ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုမသိဘူး " လို့ ကျွန်တော်မသိသလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ် … အကြောင်းက ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကလေးက ကျွန်တော့်နောက်မှာ ရှိနေလို့ပါပဲ … အမေဟာ တဒင်္ဂလောက် မှင်သက်သွားပြီးတဲ့နောက် "တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် … အဒေါ်လိပ်စာမှားသွားလို့ပါ" လို့ အလျင်အမြန် ပြန်ဖြေပြိး လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ် … အဲ့ဒီတော့မှ ကျွန်တော် စိတ်သက်သာရာရသွားတော့တယ် … အမေကျွန်တော့်ကို မသိသလိုနေပေးသွားတော့ နောက်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေးပူနေစရာ ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …
တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ဆီ ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ဖိတ်စာတစ်စောင် ရောက်လာခဲ့တယ် … ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရမယ်လို့ မိန်းမကို ညာပြီး ဇာတိမြို့လေးကို ထွက်လာခဲ့တယ် … ပွဲလည်းပြီးရော ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ကစားနေကျ ကောက်ရိုးခင်းနားကို လျှောက်လာခဲ့တယ် … ကျွန်တော် လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ အေးစက်နေတဲ့ မြေပြင်မှာလဲနေတဲ့ အမေ့ကို တွေ့လိုက်ရတယ် … အမေ့လက်ထဲမှာ စာတစ်စောင်ဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် … စာကိုဖောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ …
အမေ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆို ဒီဘ၀အတွက်နေရတဲ့အချိန်က လုံလောက်နေပါပြိ … ရှေ့ဆက်လည်း သိပ်နေရတော့မယ် မထင်ပါဘူး … သားရှိတဲ့ မြို့ကို အမေနောက်ထပ်မလာတော့ပါဘူး … ဒါပေမယ့် သားရယ် အမေ့ဆီကိုတော့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် လာတွေ့ပါလား … အမေ သားကိုအရမ်းလွမ်းလို့ပါ … ကျောင်းသားဟောင်း တွေ့ဆုံပွဲကို သားလာမယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ အမေအရမ်းဝမ်းသာတာပဲ … ဒါပေမယ့် သားတို့ကျောင်းကို နောက်တစ်ခါမသွားဖို့ အမေဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် … အမေ့မှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲရှိတာ သားကို အရှက်ရစေတဲ့အတွက် အမေစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ် …
သားသိရဲ့လား?? သားငယ်ငယ်တုန်းက မျက်လုံးကို မတော်တဆထိခိုက်မိပြီး သားမျက်လုံးတစ်ဖက် ပျက်စီးသွားတာလေ … အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာရမယ့် သားရဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်လို လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာတဲ့လဲ … အဲ့ဒါကြောင့် အမေ့မျက်လုံးတစ်ဖက် သားကိုပေးခဲ့တာပါ … သားလုပ်ခဲ့သမျှ ပြောခဲ့သမျှတွေအတွက် အမေဘယ်တော့မှ အပြစ်မယူခဲ့ပါဘူး … သားအမေ့ကို စိတ်ဆိုးတိုင်း အမေ့ကိုချစ်လို့ပြောတယ်လို့ပဲ အမေတွေးခဲ့ပါတယ် … သားအမေ့ဘေးမှာ ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို အမေအရမ်းသတိရတာပဲ … သားကိုလည်း အရမ်းလွမ်းတယ် … အမေသားကိုချစ်တယ် … သားဟာ အမေ့ရဲ့ ကမ္ဘာပါ ... အခုတော့လည်း အမေ့ ကမ္ဘာက အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲသွားပါပြီကွယ် …
စာကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အသက်ရှင်နေတဲ့ အမေ့အတွက် ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် ငိုကြွေးမိခဲ့ပါတော့တယ် …
My Mother Has One Eye ကို ဘာသာပြန်သည် ...
ref:Heart Canteen (via Today Myanmar)
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/04/2013 07:43:00 AM